Tababar Kor Loogu Qaadayo Maaraynta Fasalka Oo Loo Qabtay Macalimiin - Cakaara News
Tababar Kor Loogu Qaadayo Maaraynta Fasalka Oo Loo Qabtay Macalimiin
Jigjiga (Cakaaranews )Khamiis 6da Actober 2016.Tababar uu soo agaasimay xafiisaka waxbarashada DDSI Geedi - socodkiisa Horumarinta Maclimiinta Iyo Hogaaminta Waxbarashada oo ay kasoo qayb galeen qaar kamid ah maclimiinta gobalada kala ah Faafan, Jarar, Erar iyo Sitti,ayaa si heer sare ah uga qabsoosamay hoolka shirarka ee macadka maaraynta.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa ugu horayn Furay Madaxwayne Ku-Xigeenka Ahna Wasiirka Waxbarashada DDSI Mudane Mawliid Haayir Xassan oo sheegay in tababarkan ujeedadiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa maaraynta fasalka ee xiliga cashirku socdo, in qorshaha bare ee maalinlaha, todobaadlaha, bilaha iyo sanadlaha ah ee loogu talagalay sanad dugsiyeedka cusub ee 2009 T.I ay barayaashu sidii loogu talagalay ugu dhaqmaan.
Waxaa uu wasiirku intaa raaciyay in xuquuqaha barayaasha kor loo qaaday, dawladuna ay ahmiyad siisay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada, loona sameeyay nidaam lagu kala saarayo tayada barayaasha oo ah shati siin (license and relicense program).
Dhanka kale waxaa isna tababarkan ka hadlay Agaasinka Horumarinta Macalimiinta Iyo Hogaaminta Waxbarashada Mudne Farxaan Cabdi Makhtal oo sheegay in mudada uu cashirku socdo ay barayaashu ka faa’iidaystaan isla markaana ay u gudbiyaan goobihii iyo dugsiyadii ay ka yimaadeen. Ugu danbayna waxaa iyana dhankooda ka hadlay qaar kamid ah maclimiinta tababarka qaadanayay oo sheegay inay tabaabrkan muhiim uyahay islamarkaana ay hirgalin doonaan una bari doonaan ardayda sida ay ka fahmeen tababarkan.